Udara | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Otú e si eto eto na ubi: akuku, ịgbara, ịchacha, fatịlaịza
Na-enweghị cherry, o siri ike iche n'echiche ezigbo ubi. Ọ fọrọ nke nta na saịtị ọ bụla anyị na-eto eto n'ubi. Na ọtụtụ mgbe ọ bụghị otu osisi, ma ọtụtụ. Mkpụrụ nke cherry bụ ihe na-atọ ụtọ, ahụike, aromatic, na njirimara ụtọ uto, nke maara nke ọma site na nwata. Ke adianade do, cherry ahụ na-adọrọ mmasị ma na-ele anya na osisi osisi niile.
Nkọwa na foto nke ụdị cherị dị iche iche
Udara bụ mkpụrụ osisi nke mkpụrụ osisi nke ụdị anụ ahụ Plum si n'ezinụlọ Pink. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-azụ atụrụ adọpụtawo adọ ụdị ụfọdụ nke cherị na cherị, bụ ndị na-eguzogide ntu oyi na ọrịa, yana nnukwu mkpụrụ osisi. Otutu cherị dị iche iche bụ Miracle Cherry. Ị ma? Ndị ọchịagha na ohu ohu bụ Lucull mere ka cherị ndị mbụ si Asia Minor gaa Rom.
Cherries: nkọwa na foto nke ọkara ripening iche
Na-akụ mkpụrụ cherị n'ogige, nke ga-aṅụrị ọṅụ kwa afọ na ọtụtụ ihe ọkụkụ, ọ dị gị mkpa iji nlezianya mee mkpebi ya. Ikwesighi ịmalite ịchọta ozi banyere otú mkpụrụ osisi ahụ ị chọrọ si dị ukwuu ma dị ụtọ, kama ịṅa ntị n'àgwà ndị dịka nkwụsị oyi, nnwere onwe nke ọrịa na nrịanrịa, nkwụsi ike na oge mkpụrụ.
Ubi nke cherị cherries: atụmatụ nke akuku na ilekọta osisi ohia
Nri cherry bụ nke ihe ọkụkụ. Enwere ike itinye ya na piich, piom, cherry plum, aprịkọt. Ọ na-anabata gardeners maka mmalite ripening nke mkpụrụ osisi, mụ zaa, ntu oyi eguzogide na magburu onwe ya achọ Njirimara. Ndị cherị cherry dị mfe ịkụ mkpụrụ ma nọgide na-arụ ọrụ, mana ha chọrọ ịrapagidesi ike na ọrụ ugbo sitere n'aka ndị ọrụ ubi.
10 cherị dị iche iche na-ewu ewu n'oge na nkọwa na foto
Udara - ihe ndi ozo kachasi ike na omenala anyi. A na-ewere Caucasus na Crimea dị ka ebe a mụrụ ebe a. Ọ dị oke egwu, na-eto n'ọnọdụ ọ bụla, gụnyere na mpaghara nkume. Otú ọ dị, ọnọdụ kacha mma maka ibu na mkpụrụ osisi bụ ala na ala mmiri na-eme nri. N'ihi ọrụ nke ndị na-azụlite ihe ọkụkụ, cherị nwere ike iche na mkpụrụ nke mkpụrụ osisi, ụdị ya dịgasị iche iche na ike nke uto nke osisi na n'usoro mkpụrụ osisi.
Njirimara bara uru nke cherị maka ahu mmadu
Udara bụ mkpụrụ kachasị mma nke ọtụtụ, ma ọ bụghị ndị niile nwere ekele maka uru bara uru nke ọ maara nke ọma na tomato nile. Isiokwu a ga-agwa gị otu esi eji beri maka ọgwụgwọ na otú kpọmkwem cherry bara uru maka ahụ, anyị ga-atụle ajụjụ nke ọkpụkpụ cherry, ha nsogbu na uru. Ulo calories na akwukwo Cherry bu otu n'ime ezinulo Rosaceae, ya na agba ocha na agba aja ocha na igbasa okpueze.
Mmiri mmiri ozuzo kwachaa - Iwu maka ndị mbido
Ajụjụ nke mkpụrụ osisi bekee n'oge opupu ihe ubi bụ otu n'ime arụmụka kachasị maka ndị ọrụ ugbo na ndị na-amalite ọrụ. Ndị nke a anaghị anwa anwa ịkọ alaka, ebe ọ bụ na ha na-atụ egwu ịkụ mkpụrụ na imebi osisi ahụ. Ndị ọrụ ubi na-eche banyere nke a ma ghara ịghọta ihe kpatara ọtụtụ ndị ji eleghara usoro dị mkpa dị otú a anya.
Esi zọpụta cherry na oyi: ọtụtụ blanks
Cherị bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma, mkpụrụ osisi na-adọrọ mmasị ma dị mma n'ubi anyị. Oge owuwe ihe ubi enweghị ike ime n'enweghị ha. Ọtụtụ ntụziaka maka ichebe cherị maka oyi bụ ndị ezinụlọ na-eketa. Ma eleghị anya, onye ọ bụla ga-achọpụta ihe dị ọhụrụ na nkwadebe cherị. E nwere ọtụtụ ụzọ isi chekwaa cherị maka oyi: dum griza, "vitamin", ihicha, ihicha, mkpụrụ osisi candied.
Àgwà na atụmatụ nke ịkụ nke udara "Turgenevka"
N'okwu dị iche iche nke ndị na-elekọta ubi, cherry "Turgenevskaya" na-ebuli ebe dị elu, karịsịa, na mkparịta ụka banyere nkọwa dị iche iche: ha na-ezipụ foto nke osisi ha, na-ahapụ ọtụtụ nyocha na ndụmọdụ gbasara mkpụrụ osisi na-eto eto. Anyị ga-atụlekwa otu esi eto mkpụrụ dị otú ahụ n'ubi anyị. Cherry "Turgenevka": nkọwa nke ụdị dị iche iche Cherry dịgasị iche iche "Turgenevka" pụtara na 1979 n'ihi na ọtụtụ afọ nke ọrụ nke breeders na afọ ole na ole ghọrọ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị okpomọkụ na ndị bi na gardeners.
Ụdị iche iche nke mkpụrụ osisi na nkọwa na foto
Ezi cherry bụ osisi ohia nke na-esote mita abụọ n'ịdị elu. O nwere okpueze buru ibu, ogu ma o bu okpukpu okpueze, nke a na-acha uhie uhie na agba ohia tomato nke na-achikota alaka. Osisi ohia a na-eguzogidekwa ihe siri ike na pests na oria, obu ezie, dika otutu ndi ozo di iche iche, o na adighi mfe imegide coccomycosis.
Nkuzi nke udiri udiri n'ime ugbo, ihe kacha mma n'osisi na ichekwa
Osisi cherish Bessey si North America. N'ebe a, ọ na-etolite na ndagwurugwu na ọdọ mmiri, mgbe ụfọdụ ọ pụkwara ịchọta ya na ahịhịa. Graceful Bessey bushes nwere ike ịbụ ihe kachasị mma nke ubi ubi. Ọ bụ n'ihi na a na-emesapụ aka na-emesapụ aka na-emesapụ aka enwewo obi ike nke ọtụtụ ndị na-elekọta ubi gburugburu ụwa.
Cherish ma ọ bụ Niile: esi akụ na-eto eto
Nri ụtọ nke cherị na ìhè sourness nke cherị ke kiet ke otu nnukwu beri - dị otú ahụ a zọpụta, ma e wezụga na nrọ, bụ inveterate botanist. Ma na ọdịdị, ihe nile nwere ike ime, na ọbụna karị ma ọ bụrụ na a na-ewepụta ndị na-azụ anụ maka mmelite nke mmetọ pollution. N'ihi ya, e nyere ndị na-elekọta ubi ohere ịzụlite dyuk ma ọ bụ, dịka a na-akpọ ha, ọkpụite.
Udara "Black buru ibu": nkọwa, ọdịda ma na-ahapụ
N'etiti osisi dị iche iche nke mkpụrụ osisi kwesịrị igosipụta udara. Ihe a na-emeghị site na tomato nke osisi a: compotes, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, jams na jams adịwo ogologo oge na-abụ ihe eji eme ihe na kichin nke nnabata ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ejikarị cherị na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị na-eme ka achịcha ma ọ bụ dị ka ihe ndozi maka buns, dumplings na nri ndị ọzọ.
Ihe nzuzo nke ime ka ndị aṅụrụma dị n'ụlọ
Tart tart uto, odo odo na-egbuke egbuke, okpukpo di nma - ihe nile banyere ihe omumu nke udara cherry nile nke uwa. E nwere ọtụtụ ihe nchịkọta dị iche iche maka mmanya mmanya na-aba n'anya nke ụlọ: mmanya na mmanya na-egbu egbu na mmanya na-aba n'anya. Nhọrọ nke tomato E nweghị nlezianya chọrọ maka nhọrọ nke udara tomato, ọ fọrọ nke nta ka ụdị ọ bụla dị mma.
Cherry "besseya": otu esi emeso oria na pests nke udara ájá
N'etiti ụdị osisi dị iche iche na ụdị osisi ndị nwere ike ịchọta n'ụzọ dị mfe na klas ọ bụla, ọ dị mfe ịhụ cherị ájá ma ọ bụ, dịka a na-akpọkarị ya, "cheris" Bessey. N'adịghị ka ihe ndị ọzọ dị iche iche, a na-etinye osisi a n'ụdị nnukwu osisi nke osisi ruru mita 1.5. Dabere na afọ, ọdịdị nke okpueze ahụ dịgasị iche, ọ bụ ezie na kọmpat, na-ewu alaka nke osisi ndị na-eto eto, nke na-acha uhie uhie, yana akpụkpọ anụ, akwụkwọ siri ike, na-ahụkarị ya site na ahịhịa ndị ọzọ nke ubi.
Nzuzo nke ịga nke ọma cultivation nke udara "ntu oyi"
Morozovka bụ ihe eji emee ọnụ dịgasị iche iche nke ndị a na-ewu cherry n'etiti ndị ọrụ ubi. Omenala ji elu ntu oyi eguzogide, ọgaranya owuwe ihe ubi na magburu onwe uto nke tomato. Anyị na-atụ aro ka ị mara nke ọma peculiarities nke cherry Morozovskaya, yana nuances nke ịkụ na ịchekwa ihe ọkụkụ a.Akụkọ banyere ozuzu Cherry "ntu oyi" - mkpụrụ osisi na ụmụ beri dị obere, nwetara na Michurinsky Scientific Research Institute na 1997.
Nkuzi nke uzo ndi ozo: ihe kacha mma n'osisi na ichekwa
Akụkọ ihe mere eme nke cherry na cherry malitere na narị afọ nke iri na asaa ka e mechara kpochapụ mkpụrụ osisi abụọ. Ekele maka ọrụ nke ndị na-azụlite, adọ ụdị ụfọdụ ma ọ bụ ọbọgwụ, dịka a na-akpọ ha, aghọwo ndị nwere ike ịdaba, na-eguzogide ọgwụ na ọnọdụ ihu igwe ma nwee ike ịmị mkpụrụ. "Miracle Cherry": Nkọwapụta na Njirimara nke Mkpụrụ Ahụrụ bụ "Miracle Cherry" pụtara n'ihi ọrụ nke ndị agronomists Ukraine.
Nzuzo maka ihe ndi na-acho nke Sakura n'etiti etiti
Ọ bụ ezie na mba CIS osisi a anaghị eto eto, ma onye ọ bụla maara banyere ya, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịghara ịṅa ntị na Sakura na-eto eto. Osisi okooko osisi Pink na-emeri ọ bụghị nanị ndị bi na Japan na China, kamakwa ọtụtụ ndị Europe, nke gbasara njikọ gbasara sakura. Taa anyi ga achoputa otu esi agha sakura, gini bu osisi a, ma kwuekwa banyere ile osisi.
Cherry "Chernokorka": njirimara, ihe nzuzo nke na-aga nke ọma
Otu n'ime mkpụrụ acidic nke cherry nwere ụdị dị iche na mkpụrụ osisi buru ibu ma na-amị mkpụrụ, na-enweghị ezigbo acid. Achịcha Chernokorka, nke e meworo nke ọma na mpaghara Ukraine na mpaghara ụfọdụ nke Russia ruo ihe karịrị otu afọ, bụ otu n'ime ndị ahụ. Na nkọwa nke ụdị a dị ọtụtụ nuances na-adọrọ mmasị, nke anyị ga-agwa ugbu a.
Udara "otutu": njirimara, uru na odighi uru
N'ịchọ inweta tomato ndị siri ike ma dị mma na-eto n'elu ala ha, ọtụtụ ndị na-eto ndụ n'oge okpomọkụ na-amụ ihe dị iche iche nke osisi osisi na osisi ruo ogologo oge iji nweta ezigbo nsonaazụ n'ihi mgbalị nile ha. N'ezie, oke a dị oke, ma n'isiokwu a, anyị ga-ege ntị na "mmasị", nke ọ bụ, ọ bụ ezie na ọ bụ oge dị iche iche na-edozi, kama ọ bụ ihe dị elu na-eme ka ọ dị elu na ụfọdụ uru ndị ọzọ a kọwara na nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche.